SingForYou.net - Atar Yay Nan Ka Ma Nyo Mya
Atar Yay Nan Ka Ma Nyo Mya
Tags : too early to sing Thingyan song.... :D
By : aungtun1 on Feb 22, 2010
Atar Yay Nan Ka Ma Nyo Mya's Description
sister hippo lote tar nat,,Thingyan mood ka win thwar pi :D
war_tha_nar1 on Mar 10, 2015 0
always perfect what ever you sing....
YinLiHoe on Feb 23, 2010 0
Aww Thingyan Yoke Taut Mar Bel Naw.. Dee A Chan So Lwan Tel .. Dee A Chan Yoke Yin Po Ta Thi Ya Tel .. Bro AT A So Kg Tar Nae A Yan Lwan Twar Be...Kg Like Tar Ko AT Yar .. Bravo .. Cheer ********
wow.. nice2listen par shint ...ayan kg tel... arr pay thwar par tel shint .... sing more thingyan song bro ... hote tel ... thingyan ko miss thwar pi .... 5*4u :))))
bro ရယ် ရှယ်ပဲ ***** သင်္ကြန်ကို လွမ်းလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်လည်မိပါတယ်ဟာ .... သူတို့တတွေက ဆိုကုန် ကြပြီ အားကျမခံ မစိမ်းလည်းဆိုမှာပေါ့ ..... :)
bal song ko bal achain so so KO AT sing yin listen lot kg pyi thar ...5* ma ka buu tan tal:D*****
Thingyan thichin kaung layy pal f1 bro AT....thichin choice tar layy lae kaung tal.....so twer tar lal reallly nice 1 par shint....:)..:clap:clap:clap:>>>>>narr sinn arr payy twer par tal nor...ako yay:)))))
ကောင်းနေပါလားဗျာ အဲလောက်ကြီးကောင်းနေတာကြတော့ အစ်ကို ကြီးရာ ညီတောင် လိုက်ဆိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ဒါပေမဲ့အစ်ကိုတို့ လောက် မကောင်းတော့ စိတ်အားငယ်ရပြန်ရော့ဗျာ.............. အားပေးသွားတယ် ဘရားသားကြီးရေ
________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ ________________#####_____________________________ _______________.##~~##____________________________ ______________.##~~~~##__________________________ _____________.##~~~~~.##._________________________ ____________.##~~~~~~..##.________________________ ___________.##~~~~~~~...##._______________________ __________.##~~~~~~~~....##.______________________ _________.##~~~~~~~~~~~##______________________ _________.##~~~ThinGyan~~~##._____________________ _________##~~~Present~~~~~##_____________________ _________##~~~For You ~~~~.##_____________________ _________##~~~~~~~~~~~~.##_____________________ _________.##~~~~~~~~~~~~##_____________________ _________.##~~~~~~~~~~~.##_____________________ ___________.############________________________ ____________.###########________________________ နားထောင်လို့အလွန်ကောင်း ... ၅စတားစ် .... အေ့ ~~~~~~~~~~ အေ့ ~~~~ :P:):D
MH on Feb 23, 2010 0
လောက်ဘူးတစ်လုံးထဲနဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တွေဖြစ်ကုန်မယ်။ အကိုအောင်ထွန်း ဂွတ်တယ် သင်္ကြန်သီချင်းလဲဆိုတတ်တာပဲ အံရောအံရော....
minla on Feb 23, 2010 0
ဟဟ..ဒီရက်ပိုင်း သင်္ကြန်သီချင်းတွေ SFY မှာ ခေတ်စားနေပါ့လား...ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်.. ဆိုကြ..ဆိုကြ.. ကျွှန်တော်တို့ ကတော့ ငိုပြလိုက်မယ်.. သကြန် မကဲ ရလို့ ..... :P
Orchid lae so chin nay tar ayan be Thingyan song lay taport shi thal he he ဆိုတဲ့ လူတွေမရှိသေးလို့စောင့် နေတာဒီနေ့တော့ဆိုပြီ...ကိုအောင်ထွန်း Vocal နှင့်ဒီ သီချင်းက မူရင်းထက်တောင်ကောင်းနေသလားလို့ ... ဒီသီချင်းမှာ Vocal နည်းနည်းချိန်းသွားတယ်နော်... ဆိုဟန်လည်းခါတိုင်းလိုလေးမနေဘူး...ဝေဖန်တာလွန်ရင် Sorry naw ရန်ကုန်မှာဆို The Best Of Melody World အစီအစဉ်လာရင် ဒိုင်တွေအကဲဖြတ်တာသဘောကျလို့သူ တို့လိုပြောကြည့်တာ မိန်းကလေးတွေကျတော့အဲ့လိုအကဲ သွားဖြတ်ရင်စိတ်ဆိုးမှာဆိုးလို့ Bro တွေကတော့ဝါသနာ ရင့်သန်တဲ့လူတွေမို့ ရဲရဲကြီးအကဲဖြတ်လိုက်တာပဲ... ကိုယ်တိုင်တော့ကောင်းကောင်းမဆိုတတ်ဘူး...
zezawar on Feb 22, 2010 0
decemberlion on Feb 22, 2010 0
ဦးအောင်ထွန်း ဆိုတာ သိပ်ကို တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင့်
nanwarwarmg on Feb 22, 2010 0
သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ဆိုနေကြတာ အများကြီးပဲ..အားကျတယ်... ၀ိုးးးးးးးး အရမ်းကောင်းတာပါပဲ ကိုအောင်ထွန်းရေ...ဂရေဟန်ထက်တောင်သာတယ်..ငယ်ငယ်က ပိုးလေးထသွားပြီ ကချင်သွားတယ်.း) အရမ်းကောင်းလွန်းပါတယ်။
arr ko g ka shoooooooooooooo.....susan ka kaaaaaaaaaaa thawr p chint...dmar song listen yin nelz ka lite p....aheeeeeeeee:)))))))))))))) beautiful song with great singing.....bravoooooooooo...:clap ;clap :clap..........>>>million starz for uuuuuuuuuu.....arr ko g f1 g yay.>>>>>>
seven on Feb 22, 2010 0
~~ဒီနေ့ SFYမှာသင်္ကြန်ကျနေပြီနော်...း))))))) ဆိုထားတာ..ကတောင်က..ချင်သွားပြီ...************!!~~..
yellownavy on Feb 22, 2010 0
Ko Aung Tun, Technically, I'd say that it'sabit early for thingyan song but not spiritually for sure.... :0 Always very nice to listen to your songs... Enjoyed it very much.... 5*
paradise on Feb 22, 2010 0
မစောတော.ပါဘူး ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ခုလောက်ဆိုရင် တ၀ုန်းဝုန်းနဲ. ကြဲနေကျပြီ ....စက်ရုံ တွေမှာဆိုရင် ခုတည်းက ရေပက်နေကြပြီ ဗျ...ဟိ.အသံအေးအေးလေးနဲ. ကောင်းမွန်ပီပြင်အောင် အမြဲဆိုတတ်တဲ. brother အတွက် ******
a yan kg par tal...5*******
ahee ae di song chu kana kana danc fuu tal :PP so twar tar ayan kg tal bro kyi yay :Clapzzzzzzz
zodiac on Feb 22, 2010 0
ကိုအောင်ထွန်းရေ... ဆိုထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ..... သင်္ကြန်နဲ့တောင် အတူတူပျော်ချင်လာပြီ.....း)))
hote pa ..bro AT yayy ... sis hippo lote tarr ..:PPP tu myar twe so tot laee so chin sate ka pout lar lo ..so lite tarr ..bro so htar tar laeeayan kg tal ...arr pay twer par tal norr..*****************************:D
sch7677009 on Feb 22, 2010 0
kg pa byar naung taw gyi yae...
sithunaung on Feb 22, 2010 0
hippo on Feb 22, 2010 0
wow really nice par shint ... ***** :)))))